Maareynta Wax soosaarka: Aamusnaanta waa Guusha inta badan aan abaal marin | Martech Zone
Talaado, Juun 26, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Ahaanshaha Maamulaha Waxsoosaarka Inc 500 SaaS shirkaddu labadaba way fulisay oo si aan caadi ahayn ayay u adkaatay.
Waxaa la i weydiiyay mar hadii ay jirto jago kale oo shirkada ka mid ah waxaan jeclaan lahaa inaan helo… si daacad ah, ma jiro boos ka fiican Maareeyaha Wax soosaarka. Waxaan ka shakisanahay in Maareeyayaasha Wax soosaarka ee shirkadaha kale ee softiweerku ay oggolaadaan. Haddii aad la yaaban tahay waxa Maareeyaha Waxsoosaarku sameeyo, sharraxaadda shaqadu way ku kala duwan yihiin shirkad ilaa shirkad.
Meheradaha qaarkood, Maareeyaha Waxsoosaarka ayaa si toos ah u hago oo u leh wax soo saarkiisa isagaana lagula xisaabtamayaa guusha ama guuldarada Badeecadaas. Shaqadayda, Maareeyaha Badeecaddu wuu haggaa, mudnaanta siiyaa, oo wuxuu gacan ka geystaa qaabeynta astaamaha iyo hagaajinta aagga dalabka asaga / iyada ay mas'uul ka tahay.
Aamusku waa Dahab
Guusha markasta toos looma qiyaasi karo doolar iyo senti. Badanaa waxaa lagu cabiraa aamusnaanta. Doolarka iyo santuuqa ayaa kuu sheegi doona sida tartamada astaamahaagu ugu dhex jiraan warshadaha, laakiin aamusnaanta ayaa ah cabbirka gudaha ee guusha:
Aamusnaanta Kooxaha Horumarinta ee akhriya Shuruudahaaga iyo Isticmaalka Kiisaska oo awood u leh inay fahmaan oo ay fuliyaan.
Aamusnaanta Kooxaha Suuqgeynta ee aqoonsada qiimaha badeecadaada kuna sharxi kara maaddada.
Aamusnaanta Kooxaha Iibka ee ku mashquulsan iibinta rajooyinka u baahan sifooyinkaaga.
Aamusnaanta Kooxaha Fulinta ee sharraxaad ka bixinaya astaamahaaga kuna hirgeliya macaamiisha cusub.
Aamusnaanta Kooxaha Adeegyada Macaamiisha ee laga rabo inay ka jawaabaan taleefannada una sharxaan dhibaatooyinka ama caqabadaha la xiriira astaamahaaga.
Aamusnaanta Kooxaha Hawlgallada Wax Soo Saarka kuwaas oo ay tahay inay wax ka qabtaan dalabyada ay astaamahaagu ku dhejinayaan Servers iyo Bandwidth.
Aamusnaanta Kooxaha Hoggaaminta ee aan kala dhexgelin macaamiisha muhiimka ah ee ka cabanaya go'aannadaada.
Aamusnaanta badanaa abaalgud ma leh
Dhibaatada aamusnaanta, dabcan, waa in qofna uusan dareemin. Aamusnaanta lama cabiri karo. Aamusnaanta inta badan kuuma hesho gunno ama dallacsiin. Waxaan soo maray sii deynno badan oo waaweyn hada waxaana ku barakeeyay aamusnaanta. Mid kasta oo ka mid ah sifooyinka aan la shaqeeyay Kooxaha Horumarinta si loo qaabeeyo loona hirgeliyo waxay keeneen iibsi dheeri ah mana kordhin arrimaha adeegga macaamiisha.
Marnaba tan layma aqoonsanin this laakiin waan ku oksanahay taas! Waxaan aad ugu kalsoonahay awooddeyda sidii aan waligeyba ahaan jiray. Haddii dhammaadka dabadu aamusnaato, waxaan kuu xaqiijin karaa inay buuq badani ka badan yahay xagga hore. Ahaanshaha Maamulaha Waxsoosaarka guuleysta wuxuu u baahan yahay hammi iyo dalab aan caadi aheyn oo ku saabsan heerarka qorshaynta ee sii deynta iyo khariidadaha wadada. Maamule Badeecad ahaan, waxaad inta badan isku dhacdaa Maareeyayaasha Badeecadaha kale, Hoggaamiyeyaasha, Horumarinta, iyo xitaa Macaamiisha.
Haddii aadan u istaagin falanqayntaada iyo go'aannadaada, waxaad halis gelin kartaa macaamiishaada, rajooyinkaaga, iyo mustaqbalka shirkaddaada iyo alaabooyinkaaga. Haddii aad si fudud ugu jawaabto haa dalabyada hoggaaminta ama soo-saareyaasha dalabaadka, waad baabi'in kartaa khibradahaaga macaamiisha. Badanaa waxaad isku arki kartaa xitaa adiga oo khilaafsan madaxaaga iyo asxaabtaada.
Maareynta Wax soosaarka maahan shaqo qof walba u taal!
Taasi waa cadaadis badan waxayna ubaahantahay dad ka shaqeyn kara cadaadiskaas oo sameeya go’aamada adag. Ma fududa inaad dadka wajiga ka fiiriso oo aad u sheegto inaad jiho kale u socoto iyo sababta. Waxay u baahan tahay hoggaamiyeyaal xoog leh oo dib kuu soo celin doona kulana xisaabtami doona guusha ama guuldarrada soo-saarkaaga. Hoggaamiyeyaasha kugu aaminay inay gaaraan go'aannada ku habboon.
Waxay kaloo u baahan tahay qadarin aamusnaanta.
iPhone on Flickr: In ka badan sawirada 15,000 iyo kor u kaca
Jun 26, 2007 at 7: 10 PM
Anigu intaas ka badan waan kula heshiin kari waayey. RW ugu wanaagsan waa kuwa aan helin aqoonsi.
Jun 27, 2007 at 6: 51 PM
Doug waxaad ku musmaarantay qoraalkan. In kasta oo xoogaa jawaab celin ahi ay jeceshahay (anigu waan sameeyaa), aamusnaanta dhab ahaantii waa nooc ka mid ah jawaab celin aan inta badan la tixgelin. Iyo ictiraaf? Xirfadaha Fudud ee HR waxaa iska indhatiray maareeyayaal badan, iyagoo halmaansan sida ra'yiga fudud ee fudud uu saameyn ugu yeelan karo niyadda shaqaalahooda.
Jun 28, 2007 at 8: 57 PM
Xiiso leh! Aqoonsi iyo aamusnaan la’aan ayaa ka wanaagsan in loo aqoonsado inuu yahay ninkii wax walba qariyay - isagoo buuq badan wata. Weli shaqo ayaad heleysaa subaxdii! Laakiin, wali waa inaad sameysaa xoogaa buuq ah, hubi inay dadku ogaadaan inaad weli haraatiga tahay.
Oktoobar 12, 2008 at 8:43 PM
Mudane, Aamusnaanta aniga ayaa ah tayo taas oo ka yar ama ka yar aad u muhiim ah. Abaalmarinta aamusnaanta waa mid qeexan laakiin haddii ay la jaanqaadayso shakhsiyadda iyo shaqada uu qabtay qofka… Ha noqoto aagga wax soo saarka ama haddii kale…